Mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Barcelona oo daaha ka qaaday inuu cabsi ka qabo mustaqbalka Lionel Messi | Ciyaarside.com
Mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Barcelona oo daaha ka qaaday inuu cabsi ka qabo mustaqbalka Lionel Messi
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic ayaa wuxuu sheegay in uusan hubin haddii uu Lionel Messi kusii nagaan doono Catalans inta cimrigiisa ka dhimman.
Tababare Ernesto Valverde ayaa caddeeyey inay kooxdiisa Barcelona qandaraas cusub oo afar sanno ah la meeldhigtay Messi xagaagii lasoo dhaafay – laakiin illaa haatan qandaraaskaan qalinka kuma duugin.
Barcelona ayaa sidoo kale lagu xan waramayey inay Messi ka saxiixaneyso qandaraas nololeed (Lifetime contract) waana kunturaaddii Andres Iniesta laga saxiixay oo kale. Laakiin Messi marwalba waxaa uu sheegaa inuu jecel yahay inuu xirfaddiisa ciyaareed kusoo afjaro kooxdii uu kusoo barbaaray ee Newell’s Old Boys.
Xiddiga reer Croatia Rakitic ayaana haatan sheegay in uusan hubin haddii uu Messi xirfaddiisa kubadda cagta kusoo afjari doono Barcelona, inkastoo uu sidaas jeclaan lahaa Rakitic ahaan.
Isagoo la hadlay saxaafadda ka hor kulanka Barcelona ay wajaheyso Juventus Rakitic wuxuu yiri: “Leo wuxuu ka qeyb yahay calaamadda lagu garto Barcelona. Kalsooni ayaan ku qabaa inuu kooxda sii joogi doono.
“Laakiin boqolkiiba 100 ma hubo haddii uu xirfaddiisa kooxda ku dhammeysan doono – muranse kama taagna inuu muhiim u yahay Barcelona.”